Humambo hweiyo Undergrowth: svosve vhidhiyo mutambo weGNU Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchifunga iwe uchida mutambo wevhidhiyo nezve masvosve uye masvosve makomo, saka Humambo hweiyo Undergrowth Iwe uchachifarira. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda uye wotenga zita racho nezve € 19 yeLinux, mhanya uende kuGOG kana Steam chitoro izvozvi, ndinosiya zvinongedzo pakupera kwechinyorwa. Uye hongu, iwe unoverenga izvo nenzira kwayo, mutambo wevhidhiyo une chinangwa chekutarisira masvosve makoloni uye zvese zvinofambiswa neine simba kwazvo Unreal Injini 4 injini injini yatakataura zvakanyanya nezvayo mune zvimwe zvinyorwa zveLxA.
Iwo mutambo wevhidhiyo haufinhi zvachose, iri zita hombe uye unogona kuriona muvhidhiyo iyo yandinokusiira iwe, zvakare avo vakaiyedza vasiya zvakanyanya maonero akanaka uye ongororo iyo inofarira maEmpiresi eiyo Undergrowth. Vazhinji vari kutotarisira kuona kumwe kuwedzera, nekuti zvakavaziva zvishoma nehukuru hwakakura hwavakawana. Svosve hachisi chinhu chakanyanyo shandiswa, asi chinoshamisa hachisi nguva dzose chakaipisisa ... zvakapesana, dzimwe nguva zvinogona kuve zvakanakisa nekubuda mune zvakajairika. Vagadziri vakaita basa rakakura, kunyange hazvo vanga vakanyatso kuburitsa zvigamba uye nekuvandudza nguva pfupi yadarika, saka pakanga pasina shanduko kana zvinyorwa zvitsva. Asi ivo havana kumira, ivo vari kushanda uye ivo vataura kuti kunyarara kwavo kune chikonzero chakanaka, saka tichava nekuvandudza uye zvinyorwa zvitsva zveEmpires of the Undergrowth munguva pfupi. Kunyanya kubva muna Kubvumbi isu tichakwanisa kuona kakawanda kugadziridzwa nekuda kwekuwedzera basa.
Isu tinotarisira kuona zvigadziriso pamishandirapamwe uye mascreen atinawo iye zvino mumutambo, uye zvakare pa Freeplay modhi kuti munhu wese ari kufarira zvakanyanya, sezvo ichipa zvimwe zvakasiyana uye nemikana yekuzvigadzirisa pamwe nekuchinjika kwayo. Nekudaro, mutambo mune yakajairwa modhi haina kushata zvachose. Hautendi here? Edza iwe pachako ...
Mamwe mashoko - Gogi y chiutsi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Humambo hweiyo Undergrowth: svosve vhidhiyo mutambo weGNU Linux